Kungani izinyoni ziphupha?
Kungani izinyoni ziphupha? Ukuchazwa kwamaphupho ngezinyoni.
Izinyoni ziyizidalwa ezinenhlanhla yokuba namaphiko. Ngokuvamile, zihlobene nenkululeko nokuhlanzeka kwemicabango. Kunezintambo eziningi nezinkolelo ezihlobene nalezi zidalwa ezinamaphiko. Omunye wabo uxwayisa ukuthi uma inyoni ibetha ingilazi yefasitela, indlu izokuvakashela ukufa ngokushesha. Ngenye inothi kuthiwa umuntu obulala le nyoni uzilahla ekuhluphekeni okude nokuhlupheka. Futhi, abantu banamathele ngokukhethekile ekuchazeni amaphupho ngezinyoni. Kufanele kuqaphele ukuthi izinhlobo zezinyoni kanye nokuziphatha kwayo kubaluleke kakhulu. Okuningi kulokhu, ungafunda kulesi sihloko.
Izidalwa ezinamahlombe, njengombuso, ziphupho kulabo bantu abazobe besanda kuba nohambo olubalulekile noma umhlangano othakazelisayo. Ezincwadini zokuphupha zeVanga naseNostradamus, amaphupho anjalo anesichazamazwi esidabukisayo, ngoba afanekisela ukufa komuntu othandekayo. Ikakhulukazi ukukhathazeka labo obona isikhala esimnyama noma ugwaza. Ukuphazamisa esenzweni sephupho, sincoma ukuthi uvakashele isonto, futhi uthandazele wena nezihlobo zakho.
Futhi incazelo engalungile emaphupheni, isakhiwo esasihlobene nokufa kwenyoni. Lokhu kubonisa ukuthi esikhathini esizayo esiseduze emahlombe akho izinkinga ezinkulu noma ukugula okujulile kungawa. Kwabesifazane, lokhu kuyisibonakaliso esicacile sokuhlukana kokuqala kusuka othandekayo wakho. Amadoda afana namaphupho axwayisa ngokulahlekelwa kwempahla nesimo emehlweni abanye.
Uma uphupha izinkukhu ezincane noma amadada - lindela izinkinga ezimnandi noma izindaba ezijabulisayo.
Izinyoni zembala ekhanyayo, isibonelo, ama-hummingbirds noma ama-parrots, akuxwayisa ngehlazo elizayo. Umuntu wakho uzohlekwa yinoma yisiphi isenzo noma ukubukeka. Ukulalela ukucula okumnandi - ukuvuma ukuthanda noma umhlangano ofudumele. Abanye abahlaziyi bathi lo mphupho ukhohliswa ngobuciko futhi usebenzise ngezinhloso zakhe siqu. Zama ukucabanga ukuthi ungubani, futhi unciphise "ukuxhumana" nomuntu.
Kanye nomoya wesintu, uma izinyoni zilwa efasiteleni - yiba yingxaki. Lokhu kuyisixwayiso mayelana nokufa okungenzeka kwephupho noma othandekayo bakhe. Ikakhulukazi lo mbono unamandla, uma bekuyiphupho ngobusuku boLwesihlanu. Ukuze ususe wena kanye nezihlobo zakho inhlekelele engenzeka, tshela indaba yalolu phupho emanzini wamanje, kuzothatha ngokwawo wonke amandla amabi. Futhi, sineluleka ukuba ushintshe umcamelo.
Yini ongayilindela empeleni, uma ephusheni ukubamba inyoni?
Kubahumushi abaningi, lokhu kuthathwa njengomvuzo wokuqala womsebenzi wabo noma ukuwina okukhulu okuzayo. Leli phupho linento efanayo negama elithi "ukubamba inhlanhla ngomsila", njengoba lifanekisela nokuphumelela kuzo zonke izinzuzo nokuzuza kwezezimali. Uma uvumela ukuhamba kwenyoni, uyazi, akufanelekile ukucabanga nganoma yimaphi amathemba omuhle.
Uma inyoni ebanjwe ibalekela futhi izama ukugxila izandla, kusho ukuthi izinhlelo ezihleliwe zizoqaliswa, hhayi ngokushelela ngendlela ongathanda ngayo. Futhi, inyoni ekhukhumezayo ikuxwayisa ukuthi uhlehlisa ngokuhlehlisa ngemuva kwakho.
Akufanele uhlukumeze kakhulu, uma ukwelashwa ubuthongo kwakungeyona into enhle njengoba kulindeleke. Zonke izinto ezimbi zingakwazi ukunikeza imicabango emihle nokugeza ngamanzi angcwele. Khumbula ukuthi amaphupho afaka izifo noma ukufa yizithelo zokucabanga kwethu. Ngakho-ke, ukuzivikela emiphumeleni emibi kungaba kuphela izenzo ezinhle nemicabango emihle.
Amazinyo omntwana abukeka kanjani?
Kungani ngilahlekelwa izinyo?
Indlu iyawa: yikuphi iphupho elifanayo elikushoyo
Kungani bephupha ngokushada nothando
Ukutholwa Kweqile-2017 esikoleni samabanga aphansi - imibono yezimo ezingavamile
Qala kabusha izinzwa
Inkukhu e-marinade enhle namuncu
Amabhodlela asebenzayo - umphumela wokwelapha
Jabulela imidlalo yenkampani
Uma umntwana egula ngesikhathi eholidini
Isitshalo semifino ne-zucchini
Namathisela imivimbo ye-varicose ngesikhathi sokukhulelwa, ukwelashwa, ukuvimbela
Amathoyizi ezinganeni: Bakugan
I-New Year Simple snack 1